Iimvuno ze-Varicose - IziNyango zeNdalo kunye noKhathalelo oluPhezulu
by UDkt. Rita Louise
Iziphakamiso zezoLimo zeVilicose Veins
Indlela iNkqubo yeCimbi yeCyculculatory isebenza ngayo
Inkqubo yethu yentshukumo yenziwe ngewebhu eyinkimbinkimbi yeetriyiti kunye nemithanjeni. Imithambo yethu ithwala i-oxygen enegazi ecebileyo kwiiseli zomzimba wethu, ngelixa iimvumba zenzelwe ukupompa i-oxygen ehlwempuzekileyo kwigazi entliziyweni. Oku kufezekiswe ngoluhlu lwamagatya eendlela enye engavumelekanga igazi ukuba ligijimele emhlane.
Yintoni eyenza iVaricose Veins?
Xa umntu ehlaselwa yimivilini ye-varicose, iipavini zendlela enye zivaliwe ngokwaneleyo, ezibangelwa ukuthuthwa kwegazi ngokungafanelekanga entliziyweni.
Oku kubangela ukuba igazi ligele phambili ngasemva kweso sondlo, kudala uxinzelelo kwaye kubangela ukuba umvini uphuthuke kwaye uphazamiseke.
Ngona kunjalo kunobungozi, le meko yezempilo ichaphazela malunga ne-15% yabantu bonke abadala emhlabeni jikelele. Uninzi lwabantu lubona imithwaba ye-varicose ngenxa yebala labo elinamaqabunga, aguqulwe, avuyiweyo, kwaye ahlala eluhlaza. Ukongeza kuzo zonke iinkxalabo zokuzicoca ezinokuthi zenzeke, le mivumba ingabangela ukungathandeki ngendlela ye-aches ephazamisayo kunye neentlungu, ubuncwane busika, ukukhukhumeza kwe-ankle, iimvakalelo zokutshisa, okanye ukukhathala komlenze emva kokuma ixesha elide.
Kukho inani lezinto ezidlala indima ekuphuhliseni imithanjeni ye-varicose kuquka ukuzalwa, isini, indlela yokuphila, umsebenzi kunye nobudala. Bayaziwa kwakhona ukuba benze ngexesha lokukhulelwa ngenxa ye-progesterone ye-dilating inesiswini. Ngenxa yokuba banxulumene nokungabikho kokusabalalisa, ukubunjwa kwemifuno ye-varicose ixhaphakile kubantu abahlala okanye bahlale kwindawo enye ixesha elide, bahlala behlala kunye nemilenze yabo ehambayo kunye nabangenako ukuzivocavoca rhoqo.
Iziphakamiso zezoLimo zeeVilic Veins
Gwema ukuhlala ixesha elide - Gwema ukuma ixesha elide. Ukuba oku kuphephekiyo, hambisa imilenze yakho rhoqo. Ukutshintshela nokutshintsha i-ankle yakho iya kusebenzela ukupompa igazi ephuma emilenzeni yakho kwaye ibuye ijikeleze kwakhona.
Imida yokuhlala kwiiseshoni - Ukuba ufumana ukuhlala ixesha elide ixesha, vuka ujikeleze yonke imizuzu engama-35 ukuya kwe-45.
Hamba rhoqo - Hamba uhamba rhoqo ukuze uncede usebenzise imisipha yemilenze kwaye ukwandise ukuhamba kwegazi.
Gqoka iingubo ezigqithisileyo - Gwema iimpahla ezingavimba ukuhamba kwegazi.
Ukulawula ubunzima bakho - Gcina ubunzima bakho. Oku kunokukunceda ukunciphisa uxinzelelo kwimilenze yakho.
Ukunciphisa ityuwa kwiDiet - Ukukunceda ukukhusela umlenze kunye ne-ankle ukuvuvukala, nciphise ityuwa yakho.
Gcina Imilenze Ephakamileyo - Phakamisa imilenze yakho nanini kunokwenzeka xa uhleli.
Izilwanyana zeHazzel Izicelo - I-Topic, i-witch hazel ingasetyenziselwa kwimilenze ukuze unciphise.
I-Bross Remour Remedy - I-broom ye-Butcher isetyenziswe ngokusesikweni xa isebenzelana nezifo ezijikelezayo ezifana nemivilini ye-varicose.
UGinkgo Biloba - Izibonelelo ezifana ne-ginkgo biloba, i-gotu kola okanye i-capsicum ziye zaboniswa ukuphucula ukuhamba.
I-Coenzyme Q10 - Coenzyme Q10 iphinde iphuculise i-oxygenation yenyama kunye nokwandisa ukujikeleza.
I-Vitamin C - I-Vitamin C kunye ne-bioflavonoids kunye ne-rutin inokukunceda le meko ngokunciphisa ukunyuka kwegazi, ukukhuthaza ukuphulukisa nokunceda ukuqinisa imithwalo yegazi.
I-White Oak Bark - White oak bark ingasetyenziselwa ukunciphisa ukuvuvukala kweemvini kunye nokuqinisa iintsimbi kunye nokuqinisa imilambo yegazi.
I-Omega 3 - Ii-acids eziphambili ze-acids ezinjenge-omega 3 okanye i-olix yefelk imbewu ingakunceda ukunciphisa intlungu kunye nokuvuvukala okunxulumene nemivilini ye-varicose.
I-Article ehleliwe nguPhylameana lila Desy Meyi 15, 2016
Iintlobo ezintlanu zeMandla oLuntu
15 I-R & B i-R & B i-Romantic Duets ye-All-Time
Isenzo sokuQala ngokuPhathelene nokuQala kweNkundla
Ugqirha we-Philosophy okanye iDokotela
Iingelosi kunye noMthetho woKhenketho
Iingozi zezeMpilo kunye neziNcedo zoTshwala iiCigars
Umxholo woBomi bukaMnu Mary Jemison
100 Izilwanyana ezidlulileyo
5 Izihloko ezivela kwi-Perks yo-Wallflower
Indlela yokwenza ngokuchanekileyo Ukulinganisa ixesha elidlulileyo usebenzisa i-High-Resolution Performance Counter